ShweMinThar: May 2020
Sleep Deprivation ( အိပျရေးမဝခွငျး ) 😴 🤯
အိပျရေးမဝတာက ကနျြးမာရေးအတှကျ လုံးဝမကောငျးပါဘူး။ ဒါကို တော့လူတိုငျးသိတယျ။ ဒါပမေယျ့အိပျလားဆိုတော့မအိပျကွပါဘူး။ အလှနျဆုံး ၁၂ကြျောမှအိပျကွတာမြားတယျ။ အထူးသဖွငျ့ teenager တှဆေို ၁၂ တောငျမဟုတျဘူး ၃ ၄ ၅ နာရီလောကျမှ စအိပျကွတယျ။ အဲ့တော့နေ့ နဲ့ ညတှမှေားကုနျရော။ တခြို့ ကဒီလိုတှေး
တယျ "ညမအိပျဘဲ မနကျမှအိပျလဲအိပျတာပဲ ၊ အိပျခြိနျရတာပဲ ၊ နေ့ နဲ့ ညဘဲလှဲတာ ဘာအလုပျမှမလုပျရတာ ဘာမှမဖွဈပါဘူး "စသဖွငျ့ပေါ့။
No ပါ 🚫 ညမအိပျဘဲမနကျမှအိပျတာလဲ အိပျရေးမဝတာကိုဖွဈစေ ပါတယျ။ လူတှသေိကွတဲ့ အိပျရေးမဝတာကွောငျ့အဖွဈမြားတာတှကေ ခေါငျးကိုကျတာ ၊ ခေါငျးမူးတာ ၊ ခေါငျးမကွညျတာ အဲ့ဒါတှလေောကျပဲ သိကွတာပါ။ တကယျ့ side effect ကခေါငျးအစခွအေဆုံးဖွဈတာ ပါ။ ကိုယျကတကယျလို့အိပျတဲ့အခြိနျမပွောငျးဘဲ ဒီလိုပဲဆကျသှား နရေငျတော့ Side effect ကတော့ တခုပွီးတခုဖွဈနမှောပါ။
Symptoms စပွရငျယဘေုယအြားဖွငျ့ခေါငျးအပိုငျးက စပွကွတာ မြားတယျ။
Memory Issues မှာဆိုရငျ ညဘကျဆိုကိုယျ့ brain က သူ့ထဲ အသဈထပျထညျ့ရမယျ့ Information တှေ memory အသဈ တှကေိုမှတျမိအောငျ space တှလေုပျလရှေိ့တယျ။ အဲ့အခြိနျတှမှော မအိပျတာမြားရငျ ရတေိုရရှေညျ memory တှဆေုံးရှံးလာမယျ။ နောကျပိုငျးမမှတျမိတာတှေ မလှေ့ယျတာတှဖွေဈလာနိုငျတယျ။ အာရုံ စူးစိုကျမှုနဲ့ thinking ပိုငျးတှမှောအားနညျးလာမယျ။
Emotions အပိုငျးမှာဆိုရငျ Mood ကလုံးဝမကောငျးဘူး။
ထဈကနဲရှိ စိတျကတို၊ စိတျထဲဘယျအရာမှအခြိုးမပွဘေူး။ မွငျမွငျသမြှ ကနျ့လနျ့ ကွီးဖွဈပွီးစိတျကိုထိနျးမရဘူး။ စိတျနုတဲ့သူတှဆေိုရငျ Anxiety, Depression တှပေါဆကျဖွဈလာနိုငျတယျ။
Sleep Deprivation က Weight Gain ကိုလဲဖွဈစသေတဲ့။
ဒီ weight gain ကတော့ ဆိုးကြိုးကရတဲ့ weight လို့ ပဲပွောပါ ရစေ။ ကိုယျအလေးခြိနျပေါငျတှတေကျလာနိုငျပါတယျ ။
အခုအခြိနျက Covid 19 pandemic အခြိနျဖွဈတဲ့အတှကျ Stay Home လုပျရငျး ဖုနျးသုံးပါမြားလေ မအိပျခငျြကွလနေဲ့ Sleep Deprivation အဖွဈမြားလာကွတာပါ။ အိပျရေးမဝရငျ
ကိုယျခံအားကိုလဲ ကဆြငျးစတေဲ့အတှကျ ရောဂါပိုးတှအေလှယျတကူဝငျနိုငျတယျ။
Deprivation ကွောငျ့ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ရောဂါတှကေ နှလုံးရောဂါ ၊ ကငျဆာ ၊ သှေးတိုး ၊ ဆီးခြို စတဲ့ရောဂါတှဖွေဈနိုငျတယျ။ Sex Hormones တှပှေားနှုနျးကိုလဲ လြော့စပေါတယျ ။
Sleep Deprivation ဖွဈတာကွာလာရငျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကိုပါ ထိခိုကျလာနိုငျတယျ။ ဥပမာ - ခွထေောကျမှာ poor balance ဖွဈလာရငျ ရုတျတရကျလဲကသြှားတာတို့ ၊ လကျမှာ balance မညီရငျ ဘာမှမကိုငျနိုငျတော့ဘဲ အားမရှိတော့မြိုးတှဖွေဈနိုငျတယျ။ အိပျရေးမဝရငျ အသိသာဆုံးက မကျြလုံး မကျြနှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ skin suffer တှပေါဖွဈတတျပါတယျ ။
⚠️⚠️ အဆိုးဆုံး Sides Effect ကတော့သတောပါ ⚠⚠
( Covid ကွောငျ့မဟုတျဘဲ Stay home နရေငျးအိပျရေးမဝလို့
သရေငျလူကွားမကောငျးပါဘူး 😁😁😁 )
ဒါတှကေတော့ခေါငျးအစခွအေဆုံးဖွဈတတျတဲ့ Sides Effect တှပေါ။
၁၂ နာရီအလှနျဆုံးထားပွီး အိပျကွပါ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ
နေ့ နဲ့ညမှားနရေငျ သတိပေးပေးပါ ။
Sleep Deprivation ( အိပ်ရေးမဝခြင်း ) 😴 🤯
အိပ်ရေးမဝတာက ကျန်းမာရေးအတွက် လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ ဒါကို တော့လူတိုင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့်အိပ်လားဆိုတော့မအိပ်ကြပါဘူး။ အလွန်ဆုံး ၁၂ကျော်မှအိပ်ကြတာများတယ်။ အထူးသဖြင့် teenager တွေဆို ၁၂ တောင်မဟုတ်ဘူး ၃ ၄ ၅ နာရီလောက်မှ စအိပ်ကြတယ်။ အဲ့တော့နေ့ နဲ့ ညတွေမှားကုန်ရော။ တချို့ ကဒီလိုတွေး
တယ် "ညမအိပ်ဘဲ မနက်မှအိပ်လဲအိပ်တာပဲ ၊ အိပ်ချိန်ရတာပဲ ၊ နေ့ နဲ့ ညဘဲလွဲတာ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ရတာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး "စသဖြင့်ပေါ့။
No ပါ 🚫 ညမအိပ်ဘဲမနက်မှအိပ်တာလဲ အိပ်ရေးမဝတာကိုဖြစ်စေ ပါတယ်။ လူတွေသိကြတဲ့ အိပ်ရေးမဝတာကြောင့်အဖြစ်များတာတွေက ခေါင်းကိုက်တာ ၊ ခေါင်းမူးတာ ၊ ခေါင်းမကြည်တာ အဲ့ဒါတွေလောက်ပဲ သိကြတာပါ။ တကယ့် side effect ကခေါင်းအစခြေအဆုံးဖြစ်တာ ပါ။ ကိုယ်ကတကယ်လို့အိပ်တဲ့အချိန်မပြောင်းဘဲ ဒီလိုပဲဆက်သွား နေရင်တော့ Side effect ကတော့ တခုပြီးတခုဖြစ်နေမှာပါ။
Symptoms စပြရင်ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါင်းအပိုင်းက စပြကြတာ များတယ်။
Memory Issues မှာဆိုရင် ညဘက်ဆိုကိုယ့် brain က သူ့ထဲ အသစ်ထပ်ထည့်ရမယ့် Information တွေ memory အသစ် တွေကိုမှတ်မိအောင် space တွေလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အဲ့အချိန်တွေမှာ မအိပ်တာများရင် ရေတိုရေရှည် memory တွေဆုံးရှံးလာမယ်။ နောက်ပိုင်းမမှတ်မိတာတွေ မေ့လွယ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အာရုံ စူးစိုက်မှုနဲ့ thinking ပိုင်းတွေမှာအားနည်းလာမယ်။
Emotions အပိုင်းမှာဆိုရင် Mood ကလုံးဝမကောင်းဘူး။
ထစ်ကနဲရှိ စိတ်ကတို၊ စိတ်ထဲဘယ်အရာမှအချိုးမပြေဘူး။ မြင်မြင်သမျှ ကန့်လန့် ကြီးဖြစ်ပြီးစိတ်ကိုထိန်းမရဘူး။ စိတ်နုတဲ့သူတွေဆိုရင် Anxiety, Depression တွေပါဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
Sleep Deprivation က Weight Gain ကိုလဲဖြစ်စေသတဲ့။
ဒီ weight gain ကတော့ ဆိုးကျိုးကရတဲ့ weight လို့ ပဲပြောပါ ရစေ။ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင်တွေတက်လာနိုင်ပါတယ် ။
အခုအချိန်က Covid 19 pandemic အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် Stay Home လုပ်ရင်း ဖုန်းသုံးပါများလေ မအိပ်ချင်ကြလေနဲ့ Sleep Deprivation အဖြစ်များလာကြတာပါ။ အိပ်ရေးမဝရင်
ကိုယ်ခံအားကိုလဲ ကျဆင်းစေတဲ့အတွက် ရောဂါပိုးတွေအလွယ်တကူဝင်နိုင်တယ်။
Deprivation ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ရောဂါတွေက နှလုံးရောဂါ ၊ ကင်ဆာ ၊ သွေးတိုး ၊ ဆီးချို စတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ Sex Hormones တွေပွားနှုန်းကိုလဲ လျော့စေပါတယ် ။
Sleep Deprivation ဖြစ်တာကြာလာရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။ ဥပမာ - ခြေထောက်မှာ poor balance ဖြစ်လာရင် ရုတ်တရက်လဲကျသွားတာတို့ ၊ လက်မှာ balance မညီရင် ဘာမှမကိုင်နိုင်တော့ဘဲ အားမရှိတော့မျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ အိပ်ရေးမဝရင် အသိသာဆုံးက မျက်လုံး မျက်နှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် skin suffer တွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
⚠️⚠️ အဆိုးဆုံး Sides Effect ကတော့သေတာပါ ⚠⚠
( Covid ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Stay home နေရင်းအိပ်ရေးမဝလို့
သေရင်လူကြားမကောင်းပါဘူး 😁😁😁 )
ဒါတွေကတော့ခေါင်းအစခြေအဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ Sides Effect တွေပါ။
၁၂ နာရီအလွန်ဆုံးထားပြီး အိပ်ကြပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ
နေ့ နဲ့ညမှားနေရင် သတိပေးပေးပါ ။
Posted by Alex Aung at 5:30 AM No comments:
တောကြက်ချဉ်စပ်ဟင်း - သက်သတ်လွတ်ခရမ်းသီးပေါင်း - ဝက်ပေါင်သားနှမ်းကပ်ကြော် - ငရုတ်သီးဆားထောင်း
ကွကျဘူးသီးခဉျြစပျ၊ တောကွကျခဉျြစပျဟငျးတှကေ စားသောကျဆိုငျ တျောတျောမြားရဲ့ မီနူးမှာ တှနေ့ရေပွီး လူအမြားကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ဟငျးတဈခှကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာကွကျ – ၄၅၀ ဂရမျ (အတုံးသေးသေးတုံးထားပါ)
နနှငျးမှုနျ့ – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁/၂ ဇှနျး
အသားမှုနျ့ – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
ကွကျသှနျနီ – ၁ဝဝ ဂရမျ (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ငရုတျသီးစိမျး – ၂၀ ဂရမျ (ထောငျးပါ)
ကွကျသှနျဖွူ – ၈၀ ဂရမျ (ထောငျးပါ)
ငရုတျကောငျးစအေ့မညျး – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
ခဉျြစျောခါးသီးခွောကျ – ၃ ဖတျ (ရစေိမျထားပါ)
ရှမျးနံနံ – ၃ ပငျ
၁။ ကွကျသားကို ဆား၊ နနှငျးမှုနျ့၊ အသားမှုနျ့တို့နှငျ့ နယျထားပါ။
၂။ ငရုတျသီးစိမျး၊ ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ ငရုတျကောငျးစတေို့ကို ရောပွီး ထောငျးထားပါ။
၃။ ပွီးလြှငျ ဆီအိုးတညျ၍ ကွကျသှနျနီထညျ့ပွီး ဆီသတျပါ။
၄။ အနံ့မှေးလာသညျနှငျ့ ထောငျးထားတဲ့ ငရုတျသီးစိမျးနှငျ့ ကွကျသှနျဖွူအရောကို ထညျ့ပွီး ဆီသတျပါ။
၅။ ပွီးလြှငျ ကွကျသားကို ထညျ့ပွီး မှပေါ။
၆။ ကွကျသားအသားတငျးသညျနှငျ့ ရထေညျ့ပါ။ ရဆေူသညျနှငျ့ ခဉျြစျောခါးသီးခွောကျ ထညျ့ပွီး ကွကျသားနူးသညျအထိ ခကျြပါ။
၇။ ကွကျသားနူးလြှငျ ရှမျးနံနံကို ပါးပါးလှီးထညျ့ပါ။ ပွီးလြှငျ တောကွကျခဉျြစပျဟငျး အဆငျသငျ့ဖွဈပါပွီ။
ခရမျးသီး (အလုံးကွီး) – ၁ လုံး
မှို (ပွုတျပွီး) – ၅ ပှငျ့
ကွကျသှနျဖွူ – ၄ မွှာ
ငရုတျသီး (နီ/စိမျး) – ၄ တောငျ့
ပဲငံပွာရညျ (အကွညျ) – စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
ပဲငံပွာရညျ (အနောကျ) – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
နှမျးဆီမှေး – အနညျးငယျ
၁။ ခရမျးသီးကို အကှငျးလိုကျ မထူမပါး လှီးဖွတျထားပါ။
၂။ ဇလုံတဈလုံးထဲ ကွကျသှနျဖွူ/နီ (နုပျနုပျစဉျး)၊ ငရုတျသီး (တဈခွမျးခွမျး)၊ အရသာမြား၊ ပဲငံပွာရညျမြား၊ နှမျးဆီမှေးထညျ့ပွီး အရသာပွုလုပျပေးပါ။
၃။ ပွီးလြှငျ လှီးထားတဲ့ ခရမျးသီး၊ မှိုတို့ပျေါမှာ လောငျးထညျ့ပွီး ၁၀ မိနဈခနျ့ ပေါငျးပါ။
၄။ ခရမျးသီးနူးပွီး အရသာလညျး အနတေျောဖွဈပွီဆိုလြှငျ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကွကျသှနျမွိတျကို ဖွူးထညျ့ပွီး သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
အသားထဲသို့ ခငျြး+ကွကျသှနျဖွူထောငျးအရညျ၊ ဟငျးခကျြဝိုငျအရကျ၊ ငရုတျကောငျးမှုနျ့၊ ABC ပဲငံပွာရညျအကြဲ၊ အပဈြ၊ သကွား၊ အရသာမှုနျ့နယျပွီးအနညျးဆုံး(၃)နာရီကွာခနျ့အအေးခနျး(သို့)သာမနျအခနျးအပူခြိနျမှာနှပျထားပါ။
ABC Chilli Sauce (သို့)ဘိတျခဉျြလေးဖွငျ့တှဲဖကျသုံးဆောငျပါ။
ငရုတျသီးဆားထောငျးဖို့ အဓိကကဆြုံးနညျးစနဈက ငရုတျသီးလှျောဖို့ပါ။
မီးရှိနျအေးအေး အနအေထားမှာ အိုးကငျးကို ပူနအေောငျတညျထားပါ။
အညှာခွှထေားတဲ့ ငရုတျသီးတှကေို ထညျ့လှျောပါ ။
အနညျးငယျခွောကျပွီး ကွှပျလာပွီဆိုရငျ ဆီ(၁)ဇှနျးခနျ့ကို အနညျးငယျခငျြးစီ ဆမျးထညျ့ပေးပါ။
အနညျးဆုံး နာရီဝကျ ခနျ့အခြိနျယူပွီး မှေး၊ကြှမျးနအေောငျ လှျောပါ။
ထိုစဉျအခြိနျအတှငျး မနျကညျြးမှညျ့ရညျကို ရစေိုရုံလောကျလေး ရနှေေး စိမျထားသလို ကွကျသှနျဖွူကို ခှာပွီး ထောငျးရလှယျအောငျလေး စိတျလောကျလှီးပါ။
ငရုတျဆုံထဲမှာ ငရုတျသီးကို ဆား၊ဟငျးခတျမှုနျ့နှငျ့ ဦးစှာစထောငျးပါ။
ကွကျသှနျဖွူ ဖတျလေးတှကေို အနညျးငယျ စီထညျ့ရငျး ထောငျးသှားပါ။
ငရုတျသီးနှငျ့ ကွကျသှနျဖွူ တှေ ခှဲ ခွမျးအဆငျ့ကို ကြျောပွီဆိုရငျ မနျကညျြးသီးမှညျ့ ပဈြခဲခဲကိုအဖတျလေးတှပေါ ရောထညျ့ထောငျးပါ။
စေးထှေးတဲ့ အနအေထား ရောကျပွီဆိုရငျ ပါးပါးရိတျရိတျလှီးထားတဲ့ ရှမျးနံနံလေးတှေ ထညျ့ထောငျးပါ။
ပထမအစမှာတော့ ငရုတျသီးက ပူစပျပူလောငျပုံစံမြိုး အစပျပွငျးနတေယျလို့ ထငျရပမေယျ့ ၂ရကျလောကျ ကွာတဲ့အခါ အရသာနှပျပွီး ထောငျးထားတဲ့ ငရုတျသီးဆားထောငျးပုံစံမြိုး ရရှိပါပွီ။
သီးသနျ့ဇှနျးလေးနဲ့ပဲ သုံးမယျဆိုရငျ ရခေဲသတ်ေတာ ထဲထညျ့စရာမလိုပဲ အနညျးဆုံး(၁)လခနျ့
ကြက်ဘူးသီးချဉ်စပ်၊ တောကြက်ချဉ်စပ်ဟင်းတွေက စားသောက်ဆိုင် တော်တော်များရဲ့ မီနူးမှာ တွေ့နေရပြီး လူအများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာကြက် – ၄၅၀ ဂရမ် (အတုံးသေးသေးတုံးထားပါ)
နနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
အသားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ – ၁၀ဝ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၂၀ ဂရမ် (ထောင်းပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ – ၈၀ ဂရမ် (ထောင်းပါ)
ငရုတ်ကောင်းစေ့အမည်း – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ချဉ်စော်ခါးသီးခြောက် – ၃ ဖတ် (ရေစိမ်ထားပါ)
ရှမ်းနံနံ – ၃ ပင်
၁။ ကြက်သားကို ဆား၊ နနွင်းမှုန့်၊ အသားမှုန့်တို့နှင့် နယ်ထားပါ။
၂။ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ငရုတ်ကောင်းစေ့တို့ကို ရောပြီး ထောင်းထားပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ဆီအိုးတည်၍ ကြက်သွန်နီထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။
၄။ အနံ့မွှေးလာသည်နှင့် ထောင်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူအရောကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ကြက်သားကို ထည့်ပြီး မွှေပါ။
၆။ ကြက်သားအသားတင်းသည်နှင့် ရေထည့်ပါ။ ရေဆူသည်နှင့် ချဉ်စော်ခါးသီးခြောက် ထည့်ပြီး ကြက်သားနူးသည်အထိ ချက်ပါ။
၇။ ကြက်သားနူးလျှင် ရှမ်းနံနံကို ပါးပါးလှီးထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် တောကြက်ချဉ်စပ်ဟင်း အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
ခရမ်းသီး (အလုံးကြီး) – ၁ လုံး
မှို (ပြုတ်ပြီး) – ၅ ပွင့်
ငရုတ်သီး (နီ/စိမ်း) – ၄ တောင့်
ပဲငံပြာရည် (အကြည်) – စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် (အနောက်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – အနည်းငယ်
၂။ ဇလုံတစ်လုံးထဲ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ (နုပ်နုပ်စဉ်း)၊ ငရုတ်သီး (တစ်ခြမ်းခြမ်း)၊ အရသာများ၊ ပဲငံပြာရည်များ၊ နှမ်းဆီမွှေးထည့်ပြီး အရသာပြုလုပ်ပေးပါ။
၃။ ပြီးလျှင် လှီးထားတဲ့ ခရမ်းသီး၊ မှိုတို့ပေါ်မှာ လောင်းထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် ပေါင်းပါ။
၄။ ခရမ်းသီးနူးပြီး အရသာလည်း အနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ကို ဖြူးထည့်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အသားထဲသို့ ချင်း+ကြက်သွန်ဖြူထောင်းအရည်၊ ဟင်းချက်ဝိုင်အရက်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ABC ပဲငံပြာရည်အကျဲ၊ အပျစ်၊ သကြား၊ အရသာမှုန့်နယ်ပြီးအနည်းဆုံး(၃)နာရီကြာခန့်အအေးခန်း(သို့)သာမန်အခန်းအပူချိန်မှာနှပ်ထားပါ။
ABC Chilli Sauce (သို့)ဘိတ်ချဉ်လေးဖြင့်တွဲဖက်သုံးဆောင်ပါ။
ငရုတ်သီးဆားထောင်းဖို့ အဓိကကျဆုံးနည်းစနစ်က ငရုတ်သီးလှော်ဖို့ပါ။
မီးရှိန်အေးအေး အနေအထားမှာ အိုးကင်းကို ပူနေအောင်တည်ထားပါ။
အညှာခြွေထားတဲ့ ငရုတ်သီးတွေကို ထည့်လှော်ပါ ။
အနည်းငယ်ခြောက်ပြီး ကြွပ်လာပြီဆိုရင် ဆီ(၁)ဇွန်းခန့်ကို အနည်းငယ်ချင်းစီ ဆမ်းထည့်ပေးပါ။
အနည်းဆုံး နာရီဝက် ခန့်အချိန်ယူပြီး မွှေး၊ကျွမ်းနေအောင် လှော်ပါ။
ထိုစဉ်အချိန်အတွင်း မန်ကျည်းမှည့်ရည်ကို ရေစိုရုံလောက်လေး ရေနွေး စိမ်ထားသလို ကြက်သွန်ဖြူကို ခွာပြီး ထောင်းရလွယ်အောင်လေး စိတ်လောက်လှီးပါ။
ငရုတ်ဆုံထဲမှာ ငရုတ်သီးကို ဆား၊ဟင်းခတ်မှုန့်နှင့် ဦးစွာစထောင်းပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ဖတ်လေးတွေကို အနည်းငယ် စီထည့်ရင်း ထောင်းသွားပါ။
ငရုတ်သီးနှင့် ကြက်သွန်ဖြူ တွေ ခွဲ ခြမ်းအဆင့်ကို ကျော်ပြီဆိုရင် မန်ကျည်းသီးမှည့် ပျစ်ခဲခဲကိုအဖတ်လေးတွေပါ ရောထည့်ထောင်းပါ။
စေးထွေးတဲ့ အနေအထား ရောက်ပြီဆိုရင် ပါးပါးရိတ်ရိတ်လှီးထားတဲ့ ရှမ်းနံနံလေးတွေ ထည့်ထောင်းပါ။
ပထမအစမှာတော့ ငရုတ်သီးက ပူစပ်ပူလောင်ပုံစံမျိုး အစပ်ပြင်းနေတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ၂ရက်လောက် ကြာတဲ့အခါ အရသာနှပ်ပြီး ထောင်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးဆားထောင်းပုံစံမျိုး ရရှိပါပြီ။
သီးသန့်ဇွန်းလေးနဲ့ပဲ သုံးမယ်ဆိုရင် ရေခဲသေတ္တာ ထဲထည့်စရာမလိုပဲ အနည်းဆုံး(၁)လခန့်
Posted by Alex Aung at 4:00 AM No comments:
နကျနဲသော နားလညျမှုရအောငျ စာဖတျနညျး ( in-depth reading )
(မူလရေးသားသူ - Kyaw Tun)
ကြှနျတျောတို့ အမရေိကနျကောလိပျမှာ history 300 level အခနျးတှမှောဆိုရငျ in-depth reading လို့ချေါတဲ့ အကျဆေး ၊ စာတမျးတို့ကို အသေးစိတျဖတျပွီး အဓိကအကွောငျးအရာကဘာလဲ ၊ How? ဘယျလိုဖွဈတာလဲ ? စတာတှကေို အတနျးထဲမှာ ဆှေးနှေးလရှေိ့ပါတယျ။ အတနျးထဲကို မလာမှီ စာဖတျရပါတယျ။
သမိုငျးမဂြောအခနျးတှမှော ဒီလိုနညျးလမျးတှေ ပါမောက်ခတှဆေီကကော ၊ ရေးရတဲ့ essay မေးခှနျး တှကေကော ၊ တဈခွားဖတျသောစာအုပျတှကေနေ သငျခဲ့ရပါသညျ။
ဒီအတှကျ စာထဲကိုအသေးစိတျသှားပွီးဖတျခွငျး ( going into the text ) နဲ့ နကျနဲသောနားလညျမှု ၊ စာကို အပိုငျးပိုငျး အခှဲခွားဖတျခွငျးတှငျ သုံးသော မေးခှနျးတှကေို မြှဝပေါရစေ။
ဒီဆောငျးပါး ၊ ဒီစာတမျး ရဲ့ အဓိကပွောခငျြတဲ့အခကျြကဘာလဲ။
နောကျကနထေောကျခံတဲ့ သကျသအေခကျြအလကျတှကေ ဘယျနရောမှာလဲ။
စာမဖတျခငျ ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသတျတဲ့ ကိုယျ့ခေါငျးထဲမှာရှိတဲ့မေးခှနျးတှကေို ခရြေးထားပါ။
ပွီးရငျ စာဖတျတဲ့အခါ လိုကျရှာပါ။
အမရေိကနျကောလိပျမှာ ပါမောက်ခတှကေ in your own words ( ကိုယျပိုငျစကားလုံးနဲ့ ) ဆိုပွီး ပွောခိုငျး ၊ ရေးခိုငျးလရှေိ့ပါတယျ။
ကြှနျတျော စာတှအေမြားကွီးဖတျရပါတယျ။ ဖတျထားတာကို ကြှနျတျောတို့ နားလညျသလောကျ ၊ ကိုယျပိုငျစကားလုံးနဲ့ ပွနျပွီး ပွောရပါတယျ။ ရေးရပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ပာာကိုယျရေးရပါတယျ။ ကိုယျ့စိတျနဲ့ကိုယျ ခရြေးရပါတယျ။
ဒီအတိုငျးပဲ စာဖတျပွီးတဲ့အခါ အတိုခြုပျကို ကိုယျ့စကားလုံးနဲ့ကိုယျ ၊ ကိုယျပိုငျစတိုငျနဲ့ကို ခရြေးကွညျ့ပါ။
ဘယျလို sources ( ကိုးကားခကျြ ) တှကေိုသုံးထားလဲ
တဈခွားပညာရှငျတှရေေးထားတဲ့ စာတမျး လို secondary sources လိုမြိုး အရာတှလေား
ကိုယျတှေ့ ရေးထားတဲ့ စာတှေ ဒိုငျယာရီတှေ သကျသခေံပွောကွားခကျြ ( witness account ) အငျတာဗြူးတှလေား
စာရေးဆရာရှေးထားတဲ့ ဒီကိုးကားခကျြတှကေ စာရေးဆရာရဲ့ အမွငျအပျေါ ဘယျလိုမြိုး သကျရောကျမှုရှိလဲ
How? ဘာကွောငျ့ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ။
ဒီမေးခှနျးတှကေို မေးသငျ့ပါသညျ။ ဖွဈခဲ့တဲ့အရာတှကေို ဘာကွောငျ့ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ။ ဘယျအရာတှကေ ဒီလိုဖွဈစတောလဲ။ ဘယျအရာတှကေ တှနျးအားပို့ပေးနလေဲ။ သူတို့က ဘာလို့တှနျးအားပို့ပေးနတောလဲ။
အခုဖွဈလာတဲ့ အရာရဲ့နောကျဆကျတှဲရလဒျတှကေဘာလဲ။ ( What are the consequences of this? )
ဥပမာ တဈခါတဈလေ ဆရာတှကေ What is the impact of this event in U.S history?
စတဲ့မေးခှနျးတှကေို အကျဆေးအနနေဲ့ ရေးခိုငျးလရှေိ့ပါသညျ။
ဒီစာထဲကနေ ဘာတှမြေား ခနျြထားခဲ့လဲ။
ဘာတှေ ထညျ့လိုကျရငျ ပိုပွီးတော့ ပွညျ့စုံသှားမလဲ။
စာရေးဆရာက သူပွောတာကိုယုံကွညျလာအောငျ ခံစားခကျြနညျးလမျး ( ဝမျးနညျးလာအောငျ ၊ ဒေါသထှကျလာအောငျ ) စတဲ့ စာရေးနညျးတှကေို သုံးလား။
သမိုငျး ၊ နိုငျငံရေး စာတှမှောဆိုရငျ စာရေးဆရာက liberal democracy လား ၊ Communism လား - အလုပျသမားဘကျကနလေိုကျပွီး လုပျငနျးရှငျတှကေိုမုနျးတဲ့သူလား ၊ လုပျငနျးရှငျတှနေဲ့အစိုးရပူးပေါငျးပွီး လုပျနတောဆိုတာကို ယုံကွညျတဲ့သူလား ။
ဒီလို ယုံကွညျခကျြတှကေို ငါဒါကိုယုံကွညျတယျလို့ အတိအကမြရေးထားပမေဲ့ သခြောလိုကျဖတျရငျ အသုံးအနှုနျးတှေ ရပျတညျမှုတှေ ဘကျလိုကျမှုတှကေိုကွညျ့ပွီး တနျးသိနိုငျပါသညျ။
ပထမအကွိမျ - အဓိကအကွောငျးအရာကိုရှာပါ။
ဒုတိယအကွိမျ - ပထမအကွိမျမှာ လှတျသှားတဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေိုလိုကျရှာပါ။ သကျသအေထောကျအထားတှကေို လိုကျမှတျပါ။
တတိယအကွိမျ - main argument လို့ချေါတဲ့ အဓိက စာရေးဆရာရဲ့ အမွငျကို မဉျြးတားထားပါ။
ပွနျဖတျပါ။ သူကဘာလို့ ဒီလို ထငျမွငျလဲဆိုတာကို မေးပါ။ ဘယျလို ကိုးကားခကျြတှသေုံးထားလဲဆိုတာ လိုကျလလေ့ာပါ။ မေးခှနျးထုတျပါ။
ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ နားမလညျတာတှေ ခရြေးပါ။
စိတျဝငျစားတာတှေ ခရြေးပါ။ သိခငျြတာတှေ ခရြေးပါ။
ဒီစာရေးဆရာက argue effectively and coherently ( ထိရောကျစှာနဲ့ ဘာကွောငျ့ဖွဈတယျ..ဘာကွောငျ့ဖွဈတယျ..သကျသအေထောကျအထား ခိုငျမာစှာနဲ့ ထငျမွငျခကျြကို
ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ တငျပွနိုငျလား )
အကျဆေးတှေ ၊ သုတသေန သမိုငျးစာတမျးတှနေောကျမှာ ၊ business စာအုပျတှနေောကျမှာလညျး
Bibliography လို့ချေါတဲ့ ကိုးကားခကျြတှရှေိပါတယျ
စာအုပျနာမညျတှေ ၊ တဈခွား ဆောငျးပါးနာမညျတှကေို Google မှာလိုကျရှာပါ။
Library database မှာလိုကျရှာပါ။
ဒီလိုဆိုရငျ ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပိုပွီးနကျနဲတဲ့ ၊ ပိုပွီးကယျြပွနျ့တဲ့ အသိပညာကို ရရှိပါတယျ။
စာဖတျပွီးတဲ့အခါ စာတဲ့ကအကွောငျးအရာတှကေို စိတျကူးယဉျကွညျ့ပါ။
ကြှနျတျောဆို အလိုလို စာဖတျတာနဲ့ စိတျကူးယဉျမိသညျ။
Idea2ခု ကို ပေါငျးပွီး အသဈတဈခုရလာမလားလို စဉျးစားကွညျ့ပါ။
ဥပမာ ကား နဲ့ လယောဉျပြံကိုပေါငျးကွညျ့ပါ။
ကားမှာ ဘီးပါတယျ မွပွေငျမှာမောငျးတယျ
လယောဉျပြံက ကောငျးကငျပျေါမှာ ပြံတယျ
မွပွေငျမှာမောငျးတယျ + ပြံတယျ
အဖွကေ ကားပြံ flying car
မွပွေငျမှာလညျး မောငျးနိုငျတယျ တဈခြိနျထဲမှာလညျး မိုးပျေါကို လယောဉျလိုပြံနိုငျတယျ
ဒီ concept က အခုလကျရှိတှငျ uber ကနေ အကောငျအထညျဖျောနပေါပွီ
မွပေျေါမှာမောငျးခွငျး + ရထေဲတှငျသှားခွငျး
Carship လို့ချေါတဲ့ တီထှငျမှုကို့ရတယျ
ကားနဲ့ ရအေောကျမှာသှားတဲ့ submarine ကိုပေါငျးကွညျ့ပါ
မွပေျေါမှာမောငျးခွငျး + ရအေောကျထဲမှာသှားခွငျး
Carmarine လို့ချေါတဲ့ ရထေဲရောကျသှားရငျ submarine ဖွဈသှားတဲ့ တီထှငျမှုကိုရတယျ
ဒီ carmarine ကို James Bond ရုပျရှငျကားထဲတှငျ တှနေို့ငျသညျ
မွပွေငျပျေါမှာ မောငျးနတေဲ့ ပွိုငျကားကနေ ရထေဲရောကျသှားတော့ ဘီးတှကေ အထဲဝငျပွီး submarine နောကျကနပေါတဲ့ ပနျးကာ က ကားနောကျကနေ ထှကျလာတယျ။
အမရေိကားက ဘာလို့တီထှငျမှုတှငျ ဦးဆောငျနိုငျလဲဆို‌တော့ တီထှငျကွံဆမှုညဏျနဲ့ နကျနဲတဲ့နားလညျမှုကို လကေ့ငျြ့ပေးလို့ဖွဈပါသညျ။
ဒီအတိုငျးပဲ စာထဲက အတှေးအချေါ ၂ ခု ကိုပေါငျးကွညျ့ပါ
အတှေးအချေါအသဈ တဈခု (သို့) ပိုပွီးတော့ ရှာဖှမှေုအသဈတဈခုကို ရလာလိမျ့မယျ
Synthesis လို့ချေါတဲ့ idea တှကေို ပေါငျးပွီး နောကျထပျ idea အသဈတဈခုရလာအောငျ စဉျးစားပါ။
လုံးဝ အသဈကွီးလို့ချေါလို့မရပမေဲ့ မြိုးစုံသုံးလို့ရတဲ့ ပိုပွီးအသုံးဝငျတဲ့ တီထှငျကွဆံမှုကိုရလာမှာဖွဈပါသညျ။
Padget, Steve, ed. Creativity and Critical Thinking. London: Taylor & Francis Group, 2012.
ကျွန်တော်တို့ ကျင်လည်နေရတဲ့ အခုခေတ်ကြီးကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခေတ်ကြီး အိုင်တီနည်းပညာ အရမ်းထွန်းကားပြီး ကိစ္စတော်တော်များများဟာ အဲသည်အပေါ်မှာ အခြေပြုလည်ပတ်နေတာကို အထင်းသား တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ လူမှုအသိုက်အဝန်းထဲမှာ အိုင်တီကို အခြေပြုပြီး လည်ပတ်နေတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ဆိုတာဟာ အိုင်တီကို ပင်မအခြေပြုထားတယ်ဆိုတာလည်း ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် ပြောဆိုဆက်သွယ်စရာ ကိရိယာတစ်ခုကနေ အသက်ဇီဝိန်ကို ခြွေပစ်နိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုအထိ အသွင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သေချာသိသင့်ပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်ခုပေါ်ကနေ မိမိနေအိမ်၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့၊ နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာ့ရပ်ဝန်းအသီးသီးကို အရှိန်ဟုန်မြန်မြန်နဲ့ အတားအဆီးမဲ့ ဖြတ်သန်းချိတ်ဆက်နေနိုင်တာဟာ ကောင်းကျိုးတစ်ခုကို ဖန်တီးစေနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပါ။ နည်းပညာဟာ ကောင်းကျိုးအတွက် ရည်စူးပေမယ့် နည်းပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ်ကနေ မသမာတဲ့ အကျင့်ဆိုး အကျင့်ယုတ်ရှိသူတွေ ဖန်တီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေဟာ အန္တရာယ်တစ်ခုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့ စွမ်းအားကို အကျင့်ယုတ်ယုတ် အသုံးချတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် နည်းပညာမှာ အလင်းအခြမ်းနဲ့ အမှောင်အခြမ်းဆိုတာ ရှိလာစမြဲပါ။
အသက်အရွယ် နုနယ်တဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်မပြည့်စုံနိုင်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ အရွယ်ရောက်စ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် မိဘဖြစ်သူတွေ၊ ဆွေမျိုးဖြစ်သူတွေ၊ အစ်ကိုကြီး အမကြီးဖြစ်သူတွေ၊ အုပ်ထိန်းသူဖြစ်သူတွေ မသိလိုက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တစ်ချို့ဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်ကနေ ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့ အမှောင်အခြမ်းထဲက သမာသူတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်တာတွေ၊ အနိုင်ကျင့်တာတွေ၊ စော်ကားနှောက်ယှက်တာတွေ၊ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းတာတွေကို ချင့်ချိန်ဖြေရှင်း ခုံခံကာကွယ်ဖို့ဆိုတာဟာ အသက်အရွယ် နုနယ်တဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်မပြည့်စုံနိုင်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ အရွယ်ရောက်စ ဆယ်ကျော်သက်တွေအဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဗဟုသုတ မရှိထားရင် အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။
အဲသည် မသမာသူ လိင်မုဆိုးတွေဟာ သင့်ကလေးငယ်၊ သင့်တူ၊ သင့်တူမ၊ သင့်ညီငယ်၊ သင့်ညီမဆီကို ဝင်ရောက်နေတာဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းကတဆင့်၊ အင်တာနက်ကတဆင့်၊ လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့် ဝင်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်မြင်ကွင်းမှာ ပျောက်နေနိုင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်တံခါးကို လုံခြုံအောင် ပိတ်ထားပြီး မိမိအိမ်ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ကလေးငယ်/ဆယ်ကျော်သက် (သင့်ကလေးငယ်၊ သင့်တူ၊ သင့်တူမ၊ သင့်ညီငယ်၊ သင့်ညီမ)ကို ထားလိုက်ရုံနဲ့ လုံခြုံသွားပြီလို့ တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် အခြေပြုထားတဲ့ဆီကနေတဆင့် ကလေးငယ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဆီကို လက်ကိုင်ဖုန်းကနေ “ကိုယ်ပျောက်လိင်မုဆိုး”တွေဟာ အမဲလိုက်နေသလိုမျိုး ဝင်ရောက်နေနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အသက်အရွယ်နဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ အသိပညာတွေ (လိင်ဆိုင်ရာအသိပညာအပါအဝင်) မလွဲမသေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းချုပ်ဖို့ စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အသုံးချနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
အဲဒါကတော့ ဂူးဂဲလ်မိသားစုချိတ်ဆက်မှုလို့ အမည်ရတဲ့ Google Family Link ဆိုတဲ့ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲပါ။ ကလေးငယ်ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲချိန်အတွက် နာရီဘယ်လောက်ပေးမယ် (အချိန်နာရီတွေအများကြီး မသုံးနိုင်ကန့်သတ်တာမျိုး)၊ ဘယ်အချိန်နာရီကနေ ဘယ်အချိန်နာရီအတွင်းပဲ သုံးခွင့်ပေးမယ် (ညဉ့်မနက်စေအောင်ထိန်းချုပ်တာမျိုး)၊ ဘာတွေကို သုံးထားလဲ၊ တစ်ခုချင်းစီကို အချိန်ဘယ်လောက်သုံးထားလဲ ဆိုတဲ့ စာရင်းကို သူ့ဖုန်းကို သွားကြည့်စရာမလိုဘဲ မိမိဖုန်းကနေ ကြည့်လို့ရတာမျိုး၊ App တစ်ခုခုကို သူ့ဖုန်းထဲ ထည့်သွင်းဖို့ လုပ်တဲ့အခါတိုင်း မိမိ Google အကောင့်ဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာ ပေါ်လာတာမျိုး၊ မိမိက Approve လုပ်မှ တစ်ဘက်က သူ့စက်ထဲကို Google က သွင်းခွင့်ပေးတာမျိုး။ ဒါတွေကို Google Family Link က ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ Help your family create healthy digital habits လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကျန်းမာသန့်စင်ကောင်းမွန်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်တည်ဆောက်ခြင်းလို့ သုံးနှုံးထားပါတယ်။ အန်းဒရိုက်လက်ကိုင်ဖုန်းတွေက Google ရဲ့ စနစ်နဲ့မို့ အလွယ်တကူ ထည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အိုင်ဖုန်းတွေကတော့ ဒါကို အပြည့်အဝသုံးဖို့ ခက်နိုင်ပါတယ်။ အိုင်ဖုန်းတွေမှာလည်း သူ့ရဲ့ parental controls (အုပ်ထိန်းသူ ထိန်းချုပ်မှု) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
အဲသည်လို ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်မှုတွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအားဖြင့် လုပ်ဆောင်မှသာ ကိုယ်ပျောက်လိင်မုဆိုးတွေ ဝင်ရောက်မှုကို သိရှိကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (UNESCO) ကနေ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ လိင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးသင်ကြားမှု ထည့်သွင်းဖို့ အကြံပြုထားပြီး အဲသည်အတွက် လမ်းညွှန်ချက် (guideline) တွေထဲမှာ အင်တာနက်ပေါ်မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုများအပါအဝင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်အထက်ပြုမှုများ၊ (အင်တာနက်ပေါ်မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှုများ အပါအဝင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောင့်ယှက်မှုများ၊ အနိုင်ကျင့်မှုများကို ဥပမာများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ရေး ဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နဲ့ သင့်အိမ်တံခါးကို လုံခြုံအောင် ပိတ်ထားပြီး မိမိအိမ်ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ကလေးငယ်/ဆယ်ကျော်သက် (သင့်ကလေးငယ်၊ သင့်တူ၊ သင့်တူမ၊ သင့်ညီငယ်၊ သင့်ညီမ)ကို ထားလိုက်ရုံနဲ့ လုံခြုံသွားပြီလို့ မှတ်ယူလိုက်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ သင့်ကလေးငယ်၊ သင့်တူ၊ သင့်တူမ၊ သင့်ညီငယ်၊ သင့်ညီမဆီကို လက်ကိုင်ဖုန်းကတဆင့်၊ အင်တာနက်ကတဆင့်၊ လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့် ဝင်ရောက်နေနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပျောက်လိင်မုဆိုးတွေကို ထိုက်သင့်သလို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
ဓာတ်ပုံ - Google Family Link မှ ထိန်းချုပ်ကြည့်ရှုမှု နမူနာပုံတစ်ခု
ကြှနျတျောတို့ ကငျြလညျနရေတဲ့ အခုခတျေကွီးကို နားလညျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ခတျေကွီး အိုငျတီနညျးပညာ အရမျးထှနျးကားပွီး ကိစ်စတျောတျောမြားမြားဟာ အဲသညျအပျေါမှာ အခွပွေုလညျပတျနတောကို အထငျးသား တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ လူမှုအသိုကျအဝနျးထဲမှာ အိုငျတီကို အခွပွေုပွီး လညျပတျနတေဲ့ လူမှုကှနျယကျဆိုတာဟာ အိုငျတီကို ပငျမအခွပွေုထားတယျဆိုတာလညျး ထငျရှားပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေ လကျကိုငျဖုနျးတဈလုံးဟာ လူတဈယောကျအတှကျ ပွောဆိုဆကျသှယျစရာ ကိရိယာတဈခုကနေ အသကျဇီဝိနျကို ခွှပေဈနိုငျတဲ့ လကျနကျတဈခုအထိ အသှငျပွောငျးသှားနိုငျတယျဆိုတာ သခြောသိသငျ့ပါတယျ။
လကျကိုငျဖုနျးတဈခုပျေါကနေ မိမိနအေိမျ၊ ရပျကှကျ၊ မွို့၊ နိုငျငံနဲ့ ကမ်ဘာ့ရပျဝနျးအသီးသီးကို အရှိနျဟုနျမွနျမွနျနဲ့ အတားအဆီးမဲ့ ဖွတျသနျးခြိတျဆကျနနေိုငျတာဟာ ကောငျးကြိုးတဈခုကို ဖနျတီးစနေိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးပါ။ နညျးပညာဟာ ကောငျးကြိုးအတှကျ ရညျစူးပမေယျ့ နညျးပညာရဲ့စှမျးအားပျေါကနေ မသမာတဲ့ အကငျြ့ဆိုး အကငျြ့ယုတျရှိသူတှေ ဖနျတီးတဲ့ ကိစ်စရပျတှဟော အန်တရာယျတဈခုလို ဖွဈလာပါတယျ။ နညျးပညာရဲ့ စှမျးအားကို အကငျြ့ယုတျယုတျ အသုံးခတြာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ နညျးပညာမှာ အလငျးအခွမျးနဲ့ အမှောငျအခွမျးဆိုတာ ရှိလာစမွဲပါ။
အသကျအရှယျ နုနယျတဲ့ စဉျးစားဉာဏျမပွညျ့စုံနိုငျသေးတဲ့ ကလေးငယျတှေ၊ အရှယျရောကျစ ဆယျကြျောသကျတှအေတှကျ မိဘဖွဈသူတှေ၊ ဆှမြေိုးဖွဈသူတှေ၊ အဈကိုကွီး အမကွီးဖွဈသူတှေ၊ အုပျထိနျးသူဖွဈသူတှေ မသိလိုကျနိုငျတဲ့ အန်တရာယျတဈခြို့ဟာ လကျကိုငျဖုနျးပျေါကနေ ဖွဈပျေါလေ့ ရှိပါတယျ။ နညျးပညာရဲ့ အမှောငျအခွမျးထဲက သမာသူတှရေဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အမွတျထုတျတာတှေ၊ အနိုငျကငျြ့တာတှေ၊ စျောကားနှောကျယှကျတာတှေ၊ သှေးဆောငျဖွားယောငျးတာတှကေို ခငျြ့ခြိနျဖွရှေငျး ခုံခံကာကှယျဖို့ဆိုတာဟာ အသကျအရှယျ နုနယျတဲ့ စဉျးစားဉာဏျမပွညျ့စုံနိုငျသေးတဲ့ ကလေးငယျတှေ၊ အရှယျရောကျစ ဆယျကြျောသကျတှအေဖို့ လုံလောကျတဲ့ ဗဟုသုတ မရှိထားရငျ အရမျးခကျခဲပါတယျ။
အဲသညျ မသမာသူ လိငျမုဆိုးတှဟော သငျ့ကလေးငယျ၊ သငျ့တူ၊ သငျ့တူမ၊ သငျ့ညီငယျ၊ သငျ့ညီမဆီကို ဝငျရောကျနတောဟာ လကျကိုငျဖုနျးကတဆငျ့၊ အငျတာနကျကတဆငျ့၊ လူမှုကှနျယကျကတဆငျ့ ဝငျရောကျနတောဖွဈတဲ့အတှကျ သငျ့မွငျကှငျးမှာ ပြောကျနနေိုငျပါတယျ။ သငျ့အိမျတံခါးကို လုံခွုံအောငျ ပိတျထားပွီး မိမိအိမျရဲ့ အခနျးထဲမှာ ကလေးငယျ/ဆယျကြျောသကျ (သငျ့ကလေးငယျ၊ သငျ့တူ၊ သငျ့တူမ၊ သငျ့ညီငယျ၊ သငျ့ညီမ)ကို ထားလိုကျရုံနဲ့ လုံခွုံသှားပွီလို့ တှကျမယျဆိုရငျတော့ အကွီးအကယျြ မှားယှငျးသှားနိုငျပါတယျ။ အငျတာနကျ အခွပွေုထားတဲ့ဆီကနတေဆငျ့ ကလေးငယျနဲ့ ဆယျကြျောသကျတှဆေီကို လကျကိုငျဖုနျးကနေ “ကိုယျပြောကျလိငျမုဆိုး”တှဟော အမဲလိုကျနသေလိုမြိုး ဝငျရောကျနနေိုငျပါသေးတယျ။
ဒါတှကေို ကာကှယျဖို့အတှကျ ကလေးငယျတှနေဲ့ ဆယျကြျောသကျတှကေို အသကျအရှယျနဲ့ ထိုကျသငျ့တဲ့ အသိပညာတှေ (လိငျဆိုငျရာအသိပညာအပါအဝငျ) မလှဲမသပေေးဖို့ လိုပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လကျကိုငျဖုနျးတှကေို အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ထိနျးခြုပျဖို့ စဈဆေးဖို့ လိုပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အသုံးခနြိုငျဖှယျရှိတဲ့ နညျးပညာတဈခုကို မိတျဆကျပေးပါ့မယျ။
အဲဒါကတော့ ဂူးဂဲလျမိသားစုခြိတျဆကျမှုလို့ အမညျရတဲ့ Google Family Link ဆိုတဲ့ အသုံးခဆြော့ဖျဝဲပါ။ ကလေးငယျရဲ့ လကျကိုငျဖုနျးသုံးစှဲခြိနျအတှကျ နာရီဘယျလောကျပေးမယျ (အခြိနျနာရီတှအေမြားကွီး မသုံးနိုငျကနျ့သတျတာမြိုး)၊ ဘယျအခြိနျနာရီကနေ ဘယျအခြိနျနာရီအတှငျးပဲ သုံးခှငျ့ပေးမယျ (ညဉျ့မနကျစအေောငျထိနျးခြုပျတာမြိုး)၊ ဘာတှကေို သုံးထားလဲ၊ တဈခုခငျြးစီကို အခြိနျဘယျလောကျသုံးထားလဲ ဆိုတဲ့ စာရငျးကို သူ့ဖုနျးကို သှားကွညျ့စရာမလိုဘဲ မိမိဖုနျးကနေ ကွညျ့လို့ရတာမြိုး၊ App တဈခုခုကို သူ့ဖုနျးထဲ ထညျ့သှငျးဖို့ လုပျတဲ့အခါတိုငျး မိမိ Google အကောငျ့ဆီမှာ ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးတာ ပျေါလာတာမြိုး၊ မိမိက Approve လုပျမှ တဈဘကျက သူ့စကျထဲကို Google က သှငျးခှငျ့ပေးတာမြိုး။ ဒါတှကေို Google Family Link က ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဆောငျပုဒျကတော့ Help your family create healthy digital habits လို့ ဆိုထားပါတယျ။ ကနျြးမာသနျ့စငျကောငျးမှနျတဲ့ ဒဈဂဈြတယျဆိုငျရာ အလအေ့ကငျြ့တညျဆောကျခွငျးလို့ သုံးနှုံးထားပါတယျ။ အနျးဒရိုကျလကျကိုငျဖုနျးတှကေ Google ရဲ့ စနဈနဲ့မို့ အလှယျတကူ ထညျ့လို့ရနိုငျပါတယျ။ အိုငျဖုနျးတှကေတော့ ဒါကို အပွညျ့အဝသုံးဖို့ ခကျနိုငျပါတယျ။ အိုငျဖုနျးတှမှောလညျး သူ့ရဲ့ parental controls (အုပျထိနျးသူ ထိနျးခြုပျမှု) ဆိုတာ ရှိပါတယျ။
အဲသညျလို ထိနျးခြုပျစောငျ့ကွညျ့မှုတှကေို ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာအားဖွငျ့ လုပျဆောငျမှသာ ကိုယျပြောကျလိငျမုဆိုးတှေ ဝငျရောကျမှုကို သိရှိကာကှယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂ ပညာရေး၊ သိပ်ပံနှငျ့ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့ (UNESCO) ကနေ ကမ်ဘာ့ နိုငျငံအသီးသီးရဲ့ ပညာရေးစနဈမှာ လိငျမှုဆိုငျရာပညာပေးသငျကွားမှု ထညျ့သှငျးဖို့ အကွံပွုထားပွီး အဲသညျအတှကျ လမျးညှနျခကျြ (guideline) တှထေဲမှာ အငျတာနကျပျေါမှ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အမွတျထုတျမှုမြားအပါအဝငျ) လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျအထကျပွုမှုမြား၊ (အငျတာနကျပျေါမှ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျကငျြ့မှုမြား အပါအဝငျ) လိငျပိုငျးဆိုငျရာစျောကားနှောငျ့ယှကျမှုမြား၊ အနိုငျကငျြ့မှုမြားကို ဥပမာမြားဖွငျ့ ဖျောပွနိုငျရေး ဆိုတာတှေ ပါဝငျပါတယျ။
မိတျဆှတေို့အနနေဲ့နဲ့ သငျ့အိမျတံခါးကို လုံခွုံအောငျ ပိတျထားပွီး မိမိအိမျရဲ့ အခနျးထဲမှာ ကလေးငယျ/ဆယျကြျောသကျ (သငျ့ကလေးငယျ၊ သငျ့တူ၊ သငျ့တူမ၊ သငျ့ညီငယျ၊ သငျ့ညီမ)ကို ထားလိုကျရုံနဲ့ လုံခွုံသှားပွီလို့ မှတျယူလိုကျတာမြိုး မလုပျဘဲ သငျ့ကလေးငယျ၊ သငျ့တူ၊ သငျ့တူမ၊ သငျ့ညီငယျ၊ သငျ့ညီမဆီကို လကျကိုငျဖုနျးကတဆငျ့၊ အငျတာနကျကတဆငျ့၊ လူမှုကှနျယကျကတဆငျ့ ဝငျရောကျနနေိုငျတဲ့ ကိုယျပြောကျလိငျမုဆိုးတှကေို ထိုကျသငျ့သလို ကာကှယျနိုငျကွပါစေ။
ဓာတျပုံ - Google Family Link မှ ထိနျးခြုပျကွညျ့ရှုမှု နမူနာပုံတဈခု
Posted by Alex Aung at 11:33 AM No comments:
Labels: News and Info, ကလေးသူငယ်
ကြှနျမတို့ အခုခတျေမှာ Entrepreneur ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခနခန ကွားဖူးကွပါလိမျ့မယျ.လူတှကေ လညျးအမြိုးအမြိုးအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ကွပါတယျ. အဲ့ထဲကမှခွုံငုံပွီး အဓိပ်ပါယျဖှငျ့မယျ ဆိုရငျ (Entrepreneur)စှနျ့ဉီးတီထှငျလုပျငနျးရှငျဆိုတာ စီးပှားလုပျငနျးသဈတဈခုကို စှနျ့စားမှုကွားကနဖေနျတီးသူ၊သာရငျစံ နာရငျခံ တကျသူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ .လူအမြားစုက သူတို့ကို တီထှငျသူအဖွဈလညျးမွငျတကျကွပါတယျ 🙋🏻‍♀️
အမွတျရတဲ့လုပျငနျးအဖွဈပွောငျးနိုငျတဲ့ စှမျးရညျမြိုးရှိတကျကွတယျ. Idea ကောငျးကောငျး ထုတျတကျပွီး အမွျောအမွငျရှိတကျကွတယျ.
📍ဥပမာ ကမ်ဘာကြျောတှထေဲမှာ ဆို Microsoft Company ဥက်ကဌ Bill Gate ၊
Amazon တညျထောငျသူ Jeff Bezoz ၊
Space X ဥက်ကဌ Elon Musk
📍မွနျမာ 🇲🇲 မှာဆို Tint Tint Myanmar တညျထောငျသူ ဒျေါ တငျ့တငျ့လှငျ၊
Giantpay ရဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသး ကို ထကျအာကာကြျော၊
360ed စီအီးအို ဒျေါလှလှဝငျး .
🙍စှနျ့ဦးတီထှငျ လုပျငနျးရှငျVs အသေးစားစီးပှား လုပျငနျးရှငျ 🙍‍♂️
လုပျငနျး၂မြိုးလုံးကတော အမွတျအစှနျးပျေါ အ ခွခေံတယျဆိုပမေဲ့ အသေးစားစီးပှားလုပျငနျးအမြားစုက စတိုးဆိုငျ ၊ကုနျဆုံဆိုငျ လိုမြိုး မိသားစုပိုငျလုပျငနျးတှေ ဖွဈပွီး ကိုယျ့ဒသေခံတှကေိုပဲ ကုနျပစ်စညျးနဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှေ ဖွနျ့ဖွူးရောငျးခပြေးတာပါ
စှနျ့ဦးတီထှငျသူတှကေတြော့ ဆနျးသဈတဲ့အတှေး အချေါတှနေဲ့ Start-Up လုပျငနျးတှတေညျထောငျကွပွီး လုပျငနျးခြဲ့ထှငျဖို့အိမျမကျ တှရှေိကွပါတယျ.ပစ်စညျးဖွဈစဝေနျဆောငျမှုဖွဈစေ နိုငျငံအနှံ့ ကမ်ဘာအနှံ့ မှာ ရောငျးခကြွပါတယျ.
ဒါဆို Entreprenurတဈယောကျဖွဈခွငျးရဲ့အားသာခကျြနဲ့အခကျြနဲ့ အားနညျးတဲ့အခကျြကဘာတှဖွေဈမလဲ🤔❓
📍Phone Call တှအေ မွဲဝငျ နခွေငျး
Amazon ဥက်ကဌ Jeff Beroz ကတော့ “အကယျရျြ သငျသိရှိတဲ့အရာတှလေုပျမှပဲ အောငျမွငျမယျဆုံးဖွတျထားရငျတော့ အခှငျ့အရေးတှအေမြားကွီးလကျလှတျလိုကျရတာပဲ လို့ ပွောကွားထားပါတယျ"
Business Ethics ⚖️
Ethics ဆိုတာကတိုကျရိုကျဘာသာပွနျရငျတော့ကငျြ့ဝတျပေါ့။ဒီထကျလေးလေးနကျနကျပွောရမယျဆိုရငျတော့လူတဈယောကျရဲ့လုပျရပျ သို့မဟုတျ အပွုအမူတဈခုကနောကျထပျလူဘယျနှယောကျမြားမြားကိုကောငျးကြိုး သို့မဟုတျ ဆိုးကြိုးဖွဈစလေဲ ပျေါမူတညျပွီးလူတဈယောကျရဲ့ethicsကိုဆုံးဖွတျနိုငျပါတယျ။ 👏🏻
📍ဥပမာတဈခုရှိပါ တယျ။ တျောတျောမြားမြားလဲကွားဖူးပွီးသားပါ။
တဈနမှေ့ာလူတဈယောကျကကားမောငျးလာရငျးနဲ့ရုတျတရတျဘရိတျပကျြသှားပွီးရပျလို့မရခဲ့ဘူး။အဲ့အခြိနျသူ့အရှမှေ့ာလမျးခှဲနှဈခုရှိခဲ့တယျ။တဈဖကျမှာသူသဘောကရြတဲ့ကောငျမလေး၊တဈဖကျမှာတော့ကလေးငါးယောကျကကစားနကွေတယျ။နှဈဖကျစလုံးက​တော့သူ့အတှကျရှေးရခကျစတေယျ။ဒါပမေဲ့သူမဖွဈမနတေဈဖကျကိုပွတျပွတျသားသားရှေးခယျြရတော့မယျ။ နှဈဖကျစလုံးကတော့သူ့အတှကျဆိုးကြိုးတှပေဲဖွဈစတောကတော့အသအေခြာပါပဲ။ဒါပမေဲ့ဆိုးကြိုးနညျးတာရှေးမလားမြားတာရှေးမလားဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ethicsပျေါမူတညျသှားပါတယျ။ 💁🏻‍♂️
📍ဒါဆိုBusiness Ethics ဆိုတာကရောဘာလဲ?🤔
Business Ethics ဆိုတာကcompanyတဈခုကဆုံးဖွတျခကျြတှခေမြှတျတဲ့အခါအမှားအမှနျသခြောခှဲခွားနိုငျဖို့နဲcompanyအတှငျးရောအပွငျရောမှာရှိတဲ့လူအားလုံးအတှကျကောငျးမှနျတဲ့လှမျးမိုးမှုတှပေေးနိုငျအောငျလို့ခမြှတျထားတဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှနေဲ့စံသတျမှတျခကျြတှဖွေဈပါတယျ။⚖️
📍Business Ethics ကရောဘာကွောငျ့အရေးကွီးတာလဲ?
ဒါပမေဲ့ဒီနခေ့တျေကိုရောကျလာတဲ့အခါစီးပှားရေးလုပျငနျးတှလေဲပိုပွီးအပွိုငျအဆိုငျမြားလာတာကွောငျ့ စားသုံးသူတှေ အတှကျလဲရှေးခယျြစရာoptions တှကေပိုမြားလာပါတယျ။အလုပျသမားတှအေတှကျလဲအလုပျအကိုငျအခှငျ့လမျးတှပေိုမြားလာပါတယျ။ 🏆
✅1.ကငျြ့ဝတျနဲ့မညီတဲ့အပွုအမူတှဖွေဈတဲ့ ကြားမခဲခွားဆကျဆံမှု၊လိငျပိုငျးဆိုငျရာ နောကျယှကျစျောကားမှု၊ဘကျလိုကျမှု၊အရညျအခငျြးတူသူခငျြးအခှငျ့ရေးတူညီစှာမပေးမှုစသညျတို့ကိုရှောငျရှားရပါမယျ။သို့မှသာ အလုပျသမားတှအေနနေဲ့လဲအလုပျခှငျမှာပိုမို​ပြျောရှငျလာပွီးproductivityလဲပိုမိုတိုးတကျလာမှာဖွဈပါတယျ။📈
✅3.ဒါ့အပွငျCoporate Social Responsibilityလို့ချေါတဲ့ပွညျသူလူထုအတှကျ လိုအပျသညျ့နရောမြားတှငျလုပျငနျးဘကျမှပွနျလညျလှူဒါနျးပေးခွငျး၊ လမျးတံတားကြောငျးမြားဆောကျလုပျရာတှငျပူးပေါငျးပါဝငျကူညီပေးခွငျး၊ပွညျသူလူထုအကြိုးပွုဆှေးနှေးပှဲမြားပွုလုပျပေးခွငျး
Work from Home Tips for Employers 👨‍💻👨‍🏫
လုပျငနျးတျောတျောမြားမြား Work from Home ကို ပွောငျးလဲ လုပျနရေတဲ့အခြိနျမှာ အလုပျရှငျတှေ၊ မနျနဂြော တှအေတှကျလညျး ခေါငျးစားစရာတှေ ပျေါလာနိုငျပါတယျ။ လုပျငနျးကို အရငျလို နှောငျ့နှေးမှုမရှိဘဲ လညျပတျနိုငျဖို့၊ ဝနျထမျးတှကေို အပွညျ့အဝ Support ပေးနိုငျဖို့ကို အမြိုးမြိုးစဉျးစားရသလို တဖကျမှာ ငှအေား၊ လူအားလညျး စိုကျထုတျရနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနမှေ့ာတော့ အလုပျရှငျတှေ၊ မနျနဂြော တှအေတှကျ ဘယျလိုလုပျရငျ ကိုယျလညျးပြျော၊ ဝနျထမျးလညျး ကနြေပျ၊ အလုပျလညျး အဆငျပွနေိုငျမလဲဆိုတာကို Tips လေးတှေ ဖျောပွ လုပျပေးလိုကျပါတယျ။
📍၁။ အလုပျခြိနျ (သို့) Productivity Target Guideline ကို သခြောသတျမှတျပေးပါ။ 📈⏰
Work from Home အတှငျး မှာ မနျနဂြော တဈယောကျအနနေဲ့ ဆုံးဖွတျရမှာက ကိုယျဟာ ဝနျထမျးတှဆေီက အလုပျပွီးဖို့ မြှျောလငျ့တာလား၊ အလုပျခြိနျပွညျ့အောငျလုပျဖို့ မြှျောလငျ့တာလား ဆိုတာ စဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။ နှဈခုစလုံးကို လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ Flexbility ရှိဖို့ လိုလာပါပွီ။
စညျးမဉျြး စညျးကမျး ကို သတျမှတျတဲ့အခါ ကိုယျ့ဝနျထမျးတှရေဲ့ အခွအေနေ တှကေို အဓိက ထညျ့တှကျသငျ့ပါတယျ။ အိမျကနေ အလုပျလုပျတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဝနျထမျးတိုငျးဆီက တူညီတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ ကို တူညီတဲ့ အခြိနျအတိုငျးအတာ အတှငျးမှာ မြှျောလငျ့တာက လကျတှမေ့ကနြိုငျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ဝနျထမျးအမြားစု အဆငျပွနေိုငျတဲ့ အခြိနျနဲ့ တဈနကေို့ ပမျြးမြှ အလုပျဘယျလောကျပွီးနိုငျမလဲပျေါ မူတညျပွီး လကျတှကေ့ကြ ဆုံးဖွတျပါ။ တခြိနျထဲမှာလညျး Flexibility ကို အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ခှငျ့ပွုပေးပါ။
နောကျထပျ အရေးကွီးတဲ့အခကျြကတော့ ကိုယျ့ ကုမ်ပကီ မှာ ခမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျး တှကေို ကိုယျတိုငျ လိုကျနာပေးပါ။ တခါတလေ ဝနျထမျးတှကေ အိမျမှာရှိတာပဲလေ၊ ဒါလေးတော့ လုပျပေးနိုငျမှာပါဆိုပွီး အလုပျခြိနျ ပွငျပမှာ အလုပျမခိုငျးမိပါစနေဲ့။
ဒီလို ကုမ်ပကီာဘကျက တှေးပေးပွီး အကူအညီပေးတဲ့အခါ ဝနျထမျးတှကေလညျး အားတကျစပွေီး အလုပျပိုပွီးနိုငျပါတယျ။
📍၂။ လိုအပျတဲ့ Software တှေ၊ Services တှေ ပံ့ပိုး ပေးပါ။
Video Conferencing လုပျဖို့ Zoom, Google Hangouts, Skype စတဲ့ Software တှေ၊ Microsoft Team လို Messaging System စတဲ့ Software တှကေို အသုံးပွုပေးပါ။
(Beatrix ကနလေညျး Work from Home Tools တှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။)
မွနျမာနိုငျငံမှာ Facebook ကို လုပျငနျးသုံးအတှကျ အသုံးပွုနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Facebook အစား အခွား Free Software တှကေို အသုံးပွုတာကို ပို အားပေးပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာက ကိုယျရေးကိုယျတာအတှကျ အသုံးပွုတာမြားတဲ့အတှကျ အလုပျနဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ ကို ရောယှကျစနေိုငျပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ Team Communication Guideline ပါ။ Work from Home လုပျတဲ့အခါမှာ ဝနျထမျးအခငျြးခငျြး ဆကျသှယျဖို့ အဆငျမပွတောတှေ ကွုံလာနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ - တခြို့ ဝနျထမျးတှမှော Wifi ရှိပမေဲ့ တခြို့ကတော့ ဖုနျးဘလျေ နဲ့ အလုပျလုပျနရေသူတှရှေိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တဘကျက Email နဲ့ ဆကျသှယျရငျ တခွားတဘကျက လိုငျးပျေါမှာမရှိလို့ စာပွနျမလာတဲ့အတှကျ လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ နှောငျ့နှေးမှုတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးတှကေို လြှော့ခနြိုငျဖို့ ကုမ်ပဏီ ဘကျက Work from Home Support Kit နဲ့ Communication Guideline တှေ ခထြားပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
📍၃။ Micromanaging မလုပျပါနဲ့၊ Manage လုပျပါ။
Micro Managing က လိုတာထကျပိုတဲ့ Supervising လုပျခွငျးကို ချေါပါတယျ။ အထကျလူကွီးတဈယောကျအနနေဲ့ အလုပျမပွီးမှာစိုးရိမျတဲ့စိတျ၊ ကိုယျ့ရှမှေ့ာမမွငျရတဲ့အခါ ဝနျထမျးအလုပျမလုပျနမှော စိတျပူရငျး ဖွဈတညျလာတဲ့ Management Style တဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီ Management Style က Productive ဖွဈမဲ့အစား Backfire Effect တှပေို ဖွဈလာနိုငျစပေါတယျ။ ဝနျထမျးတှဘေကျက လိုတာထကျပိုတဲ့ ဖိအား ကွုံလာတဲ့အခါမှာ အလုပျမပွီးတာမြိုး၊ အလုပျပွီးခဲ့ရငျတောငျ အမှားမှားအယှငျးယှငျးတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Micromanaging လုပျမဲ့အစား Manage လုပျပါ။
သငျ့တျောတဲ့ဘောငျကနေ ဝနျထမျးတှကေို Manage လုပျလို့ရပါတယျ။ အခုဆို သငျ့ဝနျထမျးတှရေဲ့ အလုပျခြိနျတှကေို Track လုပျလို့ရမဲ့ Time Doctor, Toggl, Rescue Time စတဲ့ Software မြားကိုလညျး အသုံးပွုပေးလို့ရပါတယျ။
ဒီလိုလုပျမှရမှာကိုလညျး ဝနျထမျးတှကေ လကျခံနားလညျပွီးသားပါ။ ဒါကွောငျ့ Productivity ကို Downgrade လုပျမယျ့ Micro Managing အစား၊ ဝနျထမျးတှေ လကျခံနားလညျပွီး အလုပျ ပွီးမွောကျစတေဲ့ Management Style ကို ပဲ လုပျဆောငျပါ။
📍၄။ ဝနျထမျးတှနေဲ့ ဆကျသှယျလုပျပါ။ ယုံကွညျမှုထားပါ။ 🙋‍♂️🙋‍♀️
Micromanaging ရဲ့ အားအကောငျးဆုံးပွိုငျဖကျက Transparent Communication ပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို နားထောငျပွီး ကိုယျ့ဘကျက ဖွဈစခေငျြတာလေးတှကေိုလညျး တောငျးဆိုပါ။ ပွီးရငျ တဈယောကျအပျေါ တဈယောကျ ယုံကွညျ့မှုထားပါ။ ဒါဟာ အခြိနျတိုငျး အလုပျလုပျမလုပျ လိုကျစဈပွီး တဈယောကျပျေါ တဈယောကျ မယုံကွညျနိုငျတာထကျစာရငျ ပိုထိရောကျနိုငျပါတယျ။
📍၅။ ပြျောစရာ Meeting လေးတှထေညျ့ပေးပါ။ 👩‍🎤👨‍🎤
နတေို့ငျး အလုပျတှလေုပျပွီး ပငျပနျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ ပြျောစရာ Meeting လေးတဈခုထညျ့ပွီး ရုပျရှငျတူတူကွညျ့တာဖွဈဖွဈ၊ စကားစမွညျပွောတာဖွဈဖွဈ၊ Treasure Hunt ဂိမျးလေးတှေ တူတူဆော့တာဖွဈဖွဈ လုပျပေးခွငျးကလညျး ဝနျထမျးတှေ စိတျပွလေကျပြောကျဖွဈစမှောပါ။
ဒီလို ကာလမှာ အလုပျရှငျရော၊ ဝနျထမျးတှအေတှကျပါ ခကျခဲပါတယျ။
ယုံကွညျမှုနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တိုငျပငျဆှေးနှေးခွငျးဖွငျ့ ဒီ အခကျအခဲ တှကေို ကြျောလှားနိုငျပွီး ဝနျထမျးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ ရငျးနှီးမှု ကို ရရှေညျတညျမွဲအောငျ တညျဆောကျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အရှုံးထဲက အမွတျဖွဈလာမှာပါ။
Written by Ei Myatnoe Aung
ကျွန်မတို့ အခုခေတ်မှာ Entrepreneur ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခနခန ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်.လူတွေက လည်းအမျိုးအမျိုးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြပါတယ်. အဲ့ထဲကမှခြုံငုံပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မယ် ဆိုရင် (Entrepreneur)စွန့်ဉီးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာ စီးပွားလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကို စွန့်စားမှုကြားကနေဖန်တီးသူ၊သာရင်စံ နာရင်ခံ တက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် .လူအများစုက သူတို့ကို တီထွင်သူအဖြစ်လည်းမြင်တက်ကြပါတယ် 🙋🏻‍♀️
အမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မျိုးရှိတက်ကြတယ်. Idea ကောင်းကောင်း ထုတ်တက်ပြီး အမြော်အမြင်ရှိတက်ကြတယ်.
📍ဥပမာ ကမ္ဘာကျော်တွေထဲမှာ ဆို Microsoft Company ဥက္ကဌ Bill Gate ၊
Amazon တည်ထောင်သူ Jeff Bezoz ၊
Space X ဥက္ကဌ Elon Musk
📍မြန်မာ 🇲🇲 မှာဆို Tint Tint Myanmar တည်ထောင်သူ ဒေါ် တင့်တင့်လွင်၊
Giantpay ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သး ကို ထက်အာကာကျော်၊
360ed စီအီးအို ဒေါ်လှလှဝင်း .
🙍စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်Vs အသေးစားစီးပွား လုပ်ငန်းရှင် 🙍‍♂️
လုပ်ငန်း၂မျိုးလုံးကတော အမြတ်အစွန်းပေါ် အ ခြေခံတယ်ဆိုပေမဲ့ အသေးစားစီးပွားလုပ်ငန်းအများစုက စတိုးဆိုင် ၊ကုန်ဆုံဆိုင် လိုမျိုး မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဒေသခံတွေကိုပဲ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတာပါ
စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကျတော့ ဆန်းသစ်တဲ့အတွေး အခေါ်တွေနဲ့ Start-Up လုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ကြပြီး လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့အိမ်မက် တွေရှိကြပါတယ်.ပစ္စည်းဖြစ်စေဝန်ဆောင်မှုဖြစ်စေ နိုင်ငံအနှံ့ ကမ္ဘာအနှံ့ မှာ ရောင်းချကြပါတယ်.
ဒါဆို Entreprenurတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်နဲ့အချက်နဲ့ အားနည်းတဲ့အချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ🤔❓
📍Phone Call တွေအ မြဲဝင် နေခြင်း
Amazon ဥက္ကဌ Jeff Beroz ကတော့ “အကယ်ရ်ျ သင်သိရှိတဲ့အရာတွေလုပ်မှပဲ အောင်မြင်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ အခွင့်အရေးတွေအများကြီးလက်လွှတ်လိုက်ရတာပဲ လို့ ပြောကြားထားပါတယ်"
Ethics ဆိုတာကတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ကျင့်ဝတ်ပေါ့။ဒီထက်လေးလေးနက်နက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ် သို့မဟုတ် အပြုအမူတစ်ခုကနောက်ထပ်လူဘယ်နှယောက်များများကိုကောင်းကျိုး သို့မဟုတ် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေလဲ ပေါ်မူတည်ပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ethicsကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ 👏🏻
📍ဥပမာတစ်ခုရှိပါ တယ်။ တော်တော်များများလဲကြားဖူးပြီးသားပါ။
တစ်နေ့မှာလူတစ်ယောက်ကကားမောင်းလာရင်းနဲ့ရုတ်တရတ်ဘရိတ်ပျက်သွားပြီးရပ်လို့မရခဲ့ဘူး။အဲ့အချိန်သူ့အရှေ့မှာလမ်းခွဲနှစ်ခုရှိခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာသူသဘောကျရတဲ့ကောင်မလေး၊တစ်ဖက်မှာတော့ကလေးငါးယောက်ကကစားနေကြတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးက​တော့သူ့အတွက်ရွေးရခက်စေတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဖြစ်မနေတစ်ဖက်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားရွေးချယ်ရတော့မယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးကတော့သူ့အတွက်ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်စေတာကတော့အသေအချာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆိုးကျိုးနည်းတာရွေးမလားများတာရွေးမလားဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ethicsပေါ်မူတည်သွားပါတယ်။ 💁🏻‍♂️
📍ဒါဆိုBusiness Ethics ဆိုတာကရောဘာလဲ?🤔
Business Ethics ဆိုတာကcompanyတစ်ခုကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့အခါအမှားအမှန်သေချာခွဲခြားနိုင်ဖို့နဲcompanyအတွင်းရောအပြင်ရောမှာရှိတဲ့လူအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေပေးနိုင်အောင်လို့ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။⚖️
📍Business Ethics ကရောဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလဲပိုပြီးအပြိုင်အဆိုင်များလာတာကြောင့် စားသုံးသူတွေ အတွက်လဲရွေးချယ်စရာoptions တွေကပိုများလာပါတယ်။အလုပ်သမားတွေအတွက်လဲအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းတွေပိုများလာပါတယ်။ 🏆
✅1.ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်တဲ့ ကျားမခဲခြားဆက်ဆံမှု၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ယှက်စော်ကားမှု၊ဘက်လိုက်မှု၊အရည်အချင်းတူသူချင်းအခွင့်ရေးတူညီစွာမပေးမှုစသည်တို့ကိုရှောင်ရှားရပါမယ်။သို့မှသာ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လဲအလုပ်ခွင်မှာပိုမို​ပျော်ရွင်လာပြီးproductivityလဲပိုမိုတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။📈
✅3.ဒါ့အပြင်Coporate Social Responsibilityလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူထုအတွက် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်လုပ်ငန်းဘက်မှပြန်လည်လှူဒါန်းပေးခြင်း၊ လမ်းတံတားကျောင်းများဆောက်လုပ်ရာတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခြင်း၊ပြည်သူလူထုအကျိုးပြုဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း
လုပ်ငန်းတော်တော်များများ Work from Home ကို ပြောင်းလဲ လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်ရှင်တွေ၊ မန်နေဂျာ တွေအတွက်လည်း ခေါင်းစားစရာတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကို အရင်လို နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ လည်ပတ်နိုင်ဖို့၊ ဝန်ထမ်းတွေကို အပြည့်အဝ Support ပေးနိုင်ဖို့ကို အမျိုးမျိုးစဉ်းစား၇သလို တဖက်မှာ ငွေအား၊ လူအားလည်း စိုက်ထုတ်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ အလုပ်ရှင်တွေ၊ မန်နေဂျာ တွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကိုယ်လည်းပျော်၊ ဝန်ထမ်းလည်း ကျေနပ်၊ အလုပ်လည်း အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာကို Tips လေးတွေ ဖော်ပြ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
📍၁။ အလုပ်ချိန် (သို့) Productivity Target Guideline ကို သေချာသတ်မှတ်ပေးပါ။ 📈⏰
Work from Home အတွင်း မှာ မန်နေဂျာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမှာက ကိုယ်ဟာ ဝန်ထမ်းတွေဆီက အလုပ်ပြီးဖို့ မျှော်လင့်တာလား၊ အလုပ်ချိန်ပြည့်အောင်လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်တာလား ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Flexbility ရှိဖို့ လိုလာပါပြီ။
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ကို သတ်မှတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေအနေ တွေကို အဓိက ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်။ အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတိုင်းဆီက တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို တူညီတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ အတွင်းမှာ မျှော်လင့်တာက လက်တွေ့မကျနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းအများစု အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ အချိန်နဲ့ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ အလုပ်ဘယ်လောက်ပြီးနိုင်မလဲပေါ် မူတည်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ဆုံးဖြတ်ပါ။ တချိန်ထဲမှာလည်း Flexibility ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွင့်ပြုပေးပါ။
နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ့် ကုမ္ပကီ မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေကို ကိုယ်တိုင် လိုက်နာပေးပါ။ တခါတလေ ဝန်ထမ်းတွေက အိမ်မှာရှိတာပဲလေ၊ ဒါလေးတော့ လုပ်ပေးနိုင်မှာပါဆိုပြီး အလုပ်ချိန် ပြင်ပမှာ အလုပ်မခိုင်းမိပါစေနဲ့။
ဒီလို ကုမ္ပကီာဘက်က တွေးပေးပြီး အကူအညီပေးတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း အားတက်စေပြီး အလုပ်ပိုပြီးနိုင်ပါတယ်။
📍၂။ လိုအပ်တဲ့ Software တွေ၊ Services တွေ ပံ့ပိုး ပေးပါ။
Video Conferencing လုပ်ဖို့ Zoom, Google Hangouts, Skype စတဲ့ Software တွေ၊ Microsoft Team လို Messaging System စတဲ့ Software တွေကို အသုံးပြုပေးပါ။
(Beatrix ကနေလည်း Work from Home Tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ကို လုပ်ငန်းသုံးအတွက် အသုံးပြုနေတာကိုတွေ့၇ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Facebook အစား အခြား Free Software တွေကို အသုံးပြုတာကို ပို အားပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် အသုံးပြုတာများတဲ့အတွက် အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကို ရောယှက်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Team Communication Guideline ပါ။ Work from Home လုပ်တဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဖို့ အဆင်မပြေတာတွေ ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - တချို့ ဝန်ထမ်းတွေမှာ Wifi ရှိပေမဲ့ တချို့ကတော့ ဖုန်းဘေလ် နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရသူတွေရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် တဘက်က Email နဲ့ ဆက်သွယ်ရင် တခြားတဘက်က လိုင်းပေါ်မှာမရှိလို့ စာပြန်မလာတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်နှေးမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ကုမ္ပဏီ ဘက်က Work from Home Support Kit နဲ့ Communication Guideline တွေ ချထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
📍၃။ Micromanaging မလုပ်ပါနဲ့၊ Manage လုပ်ပါ။
Micro Managing က လိုတာထက်ပိုတဲ့ Supervising လုပ်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ အထက်လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်မပြီးမှာစိုးရိမ်တဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်ရှေ့မှာမမြင်၇တဲ့အခါ ဝန်ထမ်းအလုပ်မလုပ်နေမှာ စိတ်ပူရင်း ဖြစ်တည်လာတဲ့ Management Style တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီ Management Style က Productive ဖြစ်မဲ့အစား Backfire Effect တွေပို ဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေဘက်က လိုတာထက်ပိုတဲ့ ဖိအား ကြုံလာတဲ့အခါမှာ အလုပ်မပြီးတာမျိုး၊ အလုပ်ပြီးခဲ့ရင်တောင် အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Micromanaging လုပ်မဲ့အစား Manage လုပ်ပါ။
သင့်တော်တဲ့ဘောင်ကနေ ဝန်ထမ်းတွေကို Manage လုပ်လို့ရပါတယ်။ အခုဆို သင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်ချိန်တွေကို Track လုပ်လို့၇မဲ့ Time Doctor, Toggl, Rescue Time စတဲ့ Software များကိုလည်း အသုံးပြုပေးလို့၇ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်မှ၇မှာကိုလည်း ဝန်ထမ်းတွေက လက်ခံနားလည်ပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် Productivity ကို Downgrade လုပ်မယ့် Micro Managing အစား၊ ဝန်ထမ်းတွေ လက်ခံနားလည်ပြီး အလုပ် ပြီးမြောက်စေတဲ့ Management Style ကို ပဲ လုပ်ဆောင်ပါ။
📍၄။ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ပါ။ ယုံကြည်မှုထားပါ။ 🙋‍♂️🙋‍♀️
Micromanaging ရဲ့ အားအကောင်းဆုံးပြိုင်ဖက်က Transparent Communication ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေကိုလည်း တောင်းဆိုပါ။ ပြီးရင် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ယုံကြည့်မှုထားပါ။ ဒါဟာ အချိန်တိုင်း အလုပ်လုပ်မလုပ် လိုက်စစ်ပြီး တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက် မယုံကြည်နိုင်တာထက်စာရင် ပိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
📍၅။ ပျော်စရာ Meeting လေးတွေထည့်ပေးပါ။ 👩‍🎤👨‍🎤
နေ့တိုင်း အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ပင်ပန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပျော်စရာ Meeting လေးတစ်ခုထည့်ပြီး ရုပ်ရှင်တူတူကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ စကားစမြည်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်၊ Treasure Hunt ဂိမ်းလေးတွေ တူတူဆော့တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးခြင်းကလည်း ဝန်ထမ်းတွေ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေမှာပါ။
ဒီလို ကာလမှာ အလုပ်ရှင်ရော၊ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပါ ခက်ခဲပါတယ်။
ယုံကြည်မှုနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဒီ အခက်အခဲ တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်းနှီးမှု ကို ရေရှည်တည်မြဲအောင် တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရှုံးထဲက အမြတ်ဖြစ်လာမှာပါ။
Posted by Alex Aung at 11:41 AM No comments:
အမဲသားထောင်းကြော် -သခင်​ကြီးငါးပိဖျော်ရည် _ သရက်သီးအုန်းနို့ကျောက်ကျောသာကူပြင်
ထိုစဉ်အတွင်းကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ကိုပါးပါးလှီးပြီးငရုတ်ခြောက်တောင့်ကိုမညှက်တညှက်ထောင်း(သို့) ကြိတ်ပေးပါ။
ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာဆီအနည်းငယ်ကိုအပူပေးပြီးပါးပါးလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ ကိုနနွင်းမှုန့်၊အရောင်တင်မှုန့်တို့နှင့်အတူဆီသတ်ပါ။
*ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ် မိမိနှစ်သက်ရာအသားဖြင့်ဤဟင်းပွဲကိုကြော်စားနိူင်ပါသည်။
ယခုလို Stay at Home ကာလမှာ အိမ်တိုင်းအတွက်မပါမဖြစ်တဲ့ ငါးပိရည်ဖျော်နည်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင့်လေးတွေများပေမယ့် တစ်ကြိမ်ဖျော်ပြီး
ငရုတ်ခြောက်တောင့် ၊ ကင်/ လှော်ထားတဲ့ အာဝါးသီး ၃ တောင့်ကိုဖယ်ထားပြီး
ငရုတ်သီးလှော်မှုန့်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်လေးဖြင့်အရသာဖြည့်ပေးပါ။ ဒညင်းသီးကတော့
စားခါနီးမှ လိုသလောက် လှီးစိတ်ထည့်ပါ။
ကျွန်တော်က ရုံးသမားဆိုတော့ တစ်ကြိမ်စားမှကိုယ်လိုသလောက်ထည့်စားပါတယ်။
ဒီဟင်းပွဲမှာ ပုစွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ၊ ကုလားအော်သီး အစရှိတာတွေကို မီးသွေးဖိုလေးမှာမြှင်း ကင်ရင်
ပိုအနံ့မွှေးပေမယ့် အကုန်လုံးအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နိူင်တာကြောင့် လှော်ပြီးလဲ ဖန်တီးနိူင်ပါတယ်။
#အရသာ ၃မျိုးထွက်တယ် ရာသီစာလေး လုပ်စားစေချင်လို့ပါ။
#AGAR ကျောက်ကျော ၁ ထုပ်
သကြား ၁၅ ကျပ်သား အချိုကြိုက်ရင် ပိုထညိ့ပါ
အုန်းနို့ ဗူးသေး ၁ ဗူး
ရေက ပုံပါသောက်ရေခွက်နဲ့ ၃ခွက်ပါ
ပထမဦးဆုံး သာကူကို ရေစိမ်ထားပါ။ သရက်သီးကို စက်နဲ့ကြိတ်ထားပါ။ ကျောက်ကျောရယ် သကြားရယ် ဆားရယ် ရေ၃ခွက်ရယ်ကိုသကြားပျော်တဲ့ထိ မွှေထားပါ။ သကြားပျော်သွားရင် ရေခွက်နဲ့ ၁ခွက် ကိုအိုးတလုံးနဲ့ မီးပြင်းပြင်းမှာကျိုပါ။ အဆက်မပျက်မွှေပေးပါ ပွက်ပွက်ဆူလာရင်ကြိတ်ထားတဲ့ သရက်သီးကို ထည့်ကျိုပါ ပွက်လာတာနဲ့ အအေးခံမည့်ဗန်းထဲထည့်ပါ။ဒါဆို ၁ထပ်ရပါပီ သာကူကို ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲ ထည့်ပီးအစေ့ပျောက်ရုံပြုတ်ပီး ဇကားလေးနဲ့စစ်ထားပေးပါ။
ကျန်တဲ့ကျောက်ကျောကို မီးပြင်းပြင်းမှာ ကျိုပေးပါ ပွက်လာရင် အုန်းနို့ဗူးလေးဖောက်ထည့်ပေးပါ။ မွှေရင်းနဲ့ သာကူလေးပါ ထည့်ပေးပါ။ ပီးရက်တော့ အစောက သရက်သီးပေါ် ဖြေးဖြေးလေး လောင်းချပေးပါ။ အအေးခံပြီးရင်တော့ ၃ထပ် လှလှလေး သရက်သီး အုန်းနို့ကျောက်ကျော သာကူပြင်လေး ရပါပြီ။ သာကူးကို အလယ်မှာထားချင်ရင်တော့ အုန်းနို့သာကူကျောက်ကျောကို အရင်ကျို ပီး နောက်မှ သရက်သီးကျောက်ကျောကို အပေါ်က လောင်းထည့်ပါ။
ထိုစဉျအတှငျးကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျဖွူ ကိုပါးပါးလှီးပွီးငရုတျခွောကျတောငျ့ကိုမညှကျတညှကျထောငျး(သို့) ကွိတျပေးပါ။
ဒယျအိုးတဈလုံးမှာဆီအနညျးငယျကိုအပူပေးပွီးပါးပါးလှီးထားတဲ့ကွကျသှနျနီ၊ ဖွူ ကိုနနှငျးမှုနျ့၊အရောငျတငျမှုနျ့တို့နှငျ့အတူဆီသတျပါ။
*ကွကျ၊ ဝကျ၊ ဆိတျ မိမိနှဈသကျရာအသားဖွငျ့ဤဟငျးပှဲကိုကွျောစားနိူငျပါသညျ။
ယခုလို Stay at Home ကာလမှာ အိမျတိုငျးအတှကျမပါမဖွဈတဲ့ ငါးပိရညျဖြျောနညျးလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ အဆငျ့လေးတှမြေားပမေယျ့ တဈကွိမျဖြျောပွီး
ကွကျသှနျဖွူ ၊ ကွကျသှနျနီ
ငရုတျခွောကျတောငျ့ ၊ ကငျ/ လှျောထားတဲ့ အာဝါးသီး ၃ တောငျ့ကိုဖယျထားပွီး
ငရုတျသီးလှျောမှုနျ့၊ ဟငျးခတျမှုနျ့လေးဖွငျ့အရသာဖွညျ့ပေးပါ။ ဒညငျးသီးကတော့
စားခါနီးမှ လိုသလောကျ လှီးစိတျထညျ့ပါ။
ကြှနျတျောက ရုံးသမားဆိုတော့ တဈကွိမျစားမှကိုယျလိုသလောကျထညျ့စားပါတယျ။
ဒီဟငျးပှဲမှာ ပုစှနျ၊ ကွကျသှနျဖွူ ၊ ငရုတျသီးစိမျး ၊ ကုလားအျောသီး အစရှိတာတှကေို မီးသှေးဖိုလေးမှာမွှငျး ကငျရငျ
ပိုအနံ့မှေးပမေယျ့ အကုနျလုံးအတှကျအဆငျမပွဖွေဈနိူငျတာကွောငျ့ လှျောပွီးလဲ ဖနျတီးနိူငျပါတယျ။
#အရသာ ၃မြိုးထှကျတယျ ရာသီစာလေး လုပျစားစခေငျြလို့ပါ။
#AGAR ကြောကျကြော ၁ ထုပျ
သကွား ၁၅ ကပျြသား အခြိုကွိုကျရငျ ပိုထညိ့ပါ
အုနျးနို့ ဗူးသေး ၁ ဗူး
ရကေ ပုံပါသောကျရခှေကျနဲ့ ၃ခှကျပါ
ပထမဦးဆုံး သာကူကို ရစေိမျထားပါ။ သရကျသီးကို စကျနဲ့ကွိတျထားပါ။ ကြောကျကြောရယျ သကွားရယျ ဆားရယျ ရေ၃ခှကျရယျကိုသကွားပြျောတဲ့ထိ မှထေားပါ။ သကွားပြျောသှားရငျ ရခှေကျနဲ့ ၁ခှကျ ကိုအိုးတလုံးနဲ့ မီးပွငျးပွငျးမှာကြိုပါ။ အဆကျမပကျြမှပေေးပါ ပှကျပှကျဆူလာရငျကွိတျထားတဲ့ သရကျသီးကို ထညျ့ကြိုပါ ပှကျလာတာနဲ့ အအေးခံမညျ့ဗနျးထဲထညျ့ပါ။ဒါဆို ၁ထပျရပါပီ သာကူကို ရနှေေးပှကျပှကျဆူထဲ ထညျ့ပီးအစပြေ့ောကျရုံပွုတျပီး ဇကားလေးနဲ့စဈထားပေးပါ။ ကနျြတဲ့ကြောကျကြောကို မီးပွငျးပွငျးမှာ ကြိုပေးပါ ပှကျလာရငျ အုနျးနို့ဗူးလေးဖောကျထညျ့ပေးပါ။ မှရေငျးနဲ့ သာကူလေးပါ ထညျ့ပေးပါ။ ပီးရကျတော့ အစောက သရကျသီးပျေါ ဖွေးဖွေးလေး လောငျးခပြေးပါ။ အအေးခံပွီးရငျတော့ ၃ထပျ လှလှလေး သရကျသီး အုနျးနို့ကြောကျကြော သာကူပွငျလေး ရပါပွီ။ သာကူးကို အလယျမှာထားခငျြရငျတော့ အုနျးနို့သာကူကြောကျကြောကို အရငျကြို ပီး နောကျမှ သရကျသီးကြောကျကြောကို အပျေါက လောငျးထညျ့ပါ။
Posted by Alex Aung at 2:25 AM No comments:
Orthorexia (သို့မဟုတ်) အစားအသောက်ရွေးချယ်ရာတွင် စိတ်စွဲလွန်ခြင်း
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ စားသောက်ခြင်းဟာ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာစိုးပြီး အစားအစာများကို တရားလွန်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း ပြုလာပြီဆိုရင်တော့ သတိပြုရမယ့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဆေးပညာမှာတော့ orthorexia လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆိုပြီး အစားအသောက်တွေကို အလွန်အကျွံ ဇီဇာကြောင်ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာက Orthorexia ပြဿနာကိုဖြစ်စေသလဲ
ပထမတော့ မိမိကျန်းမာရေးအတွက် စားသောက်မှုပုံစံကို ဂရုပြုရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အစွန်းရောက်ပြီး စိတ်အစွဲကြီးလာပါတယ်။ အပြည့်စုံဆုံးကိုမှ လိုလားခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း စတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကလည်း ဒီပြဿနာကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ တခါတရံမှာ မိမိသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်အရ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ရသူတွေမှာလည်း ဒီပြဿနာရှိလာတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ အော်ပရာအဆိုတော်များ၊ ဘဲလေးကခြေသည်များ၊ သံစုံတီးဝိုင်း ဂီတပညာရှင်များ၊ အားကစားသမားများ စသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်၊ ကျားမကွဲပြားမှု၊ ပညာအရည်အချင်း၊ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ စတာတွေပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တခါတရံမှာ အစားအသောက်ကို ပုံမှန်စိတ်နဲ့ပဲ ကျန်းမာရေးကို ရှေးရှုရွေးချယ်တာလား၊ စိတ်စွဲလွန်ပြီး ရွေးချယ်နေတာလားဆိုတာ ခွဲရခက်ပါတယ်။ ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ဒီပြဿနာရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့အချက်ကို စွိတ်စွဲခြင်းကြောင့် ဘယ်လိုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေသလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ လူမှုရေး၊ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စတာတွေပေါ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အကျွံ ကျဆင်းခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အတူသွားလာ စားသောက်ဖို့ ငြင်းဆန်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအသောက်ကို သာမန်ရွေးချယ်တတ်ခြင်းနဲ့ စိတ်စွဲလွန်ရွေးချယ်ခြင်း အကြားမှာ ခွဲခြားနိုင်ဖို့ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ချက်အချို့ ရှိပါတယ်။
၁။ အစားအသောက်အပေါ် အာရုံစိုက်လွန်ကဲမှု
ဒီအပိုင်းမှာ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရုံစိုက်လွန်ကဲနေတတ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ သိသာစွာ သိမြင်နိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့
– အမူအကျင့်/အတွေးအကြံ။ အစားအသောက်ကို အမြဲသတိထား ရွေးချယ်နေမှသာ ကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
– စိတ်ပူပန်ခြင်း။ အစားအသောက်ကို စိစစ်ရွေးချယ်တတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မိမိဖာသာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်လိုက်ပြီဆိုရင် စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မသန့်မရှင်းသလို ခံစားရခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း စတဲ့အာရုံမျိုးတွေ ခံစားရပါတယ်။
– ဆိုးရွားစွာ ကန့်သတ်ခြင်း။ အစားအသောက်ကို ကန့်သတ်ရွေးချယ်လာပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လုံးဝစားသောက်ချင်စိတ်ပျောက်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာမှ အဆိပ်ထုတ်သန့်စင်သည့် ပုံစံကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ မစားဘဲနေခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ နေ့စဉ်ဘဝကို ထိခိုက်စေသော အမူအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်း
ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းကတော့ တနေ့တာ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွေကို အဟန့်အတား ဖြစ်လာခြင်းပါပဲ။ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း။ အာဟာရမပြည့်ဝခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ဆိုးရွားစွာကျခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်ခြင်း
– လူနေမှုဘဝထိခိုက်ခြင်း။ အစားအသောက်ကို အလွန်အကျူး ရွေးချယ်နေတတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး လူမှုရေး ပညာရေးကိစ္စရပ်များမှာ ထိခိုက်လာခြင်း
– စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွဲလမ်းခြင်း။ ရုပ်ရည်သွင်ခြင်၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှု စတာတွေအတွက် အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိဖာသာ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းလမ်းများအပေါ် အလွန်အကျူးမှီခိုလာခြင်း
အစားအသောက်ကို စိစစ်လွန်းတာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အစာအာဟာရဓာတ်တွေ မရတဲ့အခါမှာ အာဟာရပြတ်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့အခါ အစာချေဖျက်နိုင်မှုပြဿနာ၊ ဓာတ်ဆားနှင့်ဟော်မုန်းများ ဟန်ချက်မညီခြင်း၊ အရိုးများ မကောင်းခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြဿနာများဟာ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစာတွေကို ဇီဇာကြောင်လွန်းပြီး မိမိဖာသာသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်မိတဲ့အခါ အပြစ်ရှိပြီး စက်ဆုပ်သလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ချေဖျက်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ခန္ဓာမှ အဆိပ်ဓာတ်ထုတ်သန့်စင်ခြင်း၊ အစာမစားဘဲနေခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေ လုပ်ဆောင်လာတတ်ပါတယ်။ ကြာလာရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အာရုံစိုက်မှုနည်းလာခြင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇီဇာကြောင်လွန်းတယကြောင့် လူမှုရေးကိစ္စတွေပါ ထိခိုက်လာပါတယ်။ ညစာစားပွဲများ ရှောင်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် စားသုံးရန်ငြင်းဆန်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မိမိရဲ့သဘောထားဟာ သူတပါးထက် သာလွန်ထူးကဲသလို စိတ်ကြီးဝင်လာတတ်ပါတယ်။ လူမှုရေးအရ ဘေးကို ရောက်လာတတ်ပါတယ်။
ဦးစွာ မိမိအခြေအနေကိုသိအောင် စေ့ငုရပါမယ်။ တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ကိုပယ်ဖျောက်ရပါမယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် ရွေးချယ်စားသောက်တယ်ဆိုပေမယ့် အလွန်အကျွံဖြစ်မလာအောင် ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများရဲ့ အကူအညီကို ရယူသင့်ပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများဆိုရာမှာ ဆရာဝန်၊ စိတ်ပညာရှင်၊ အာဟာရပညာရှင် စသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 5:46 AM No comments: